Tallaalka iyo Cadeynta Covid - Krisinformation.se
TB28 Vaccin och Covidbevis So
Dhammaan dadka ku nool Iswiidhan ayaa tallaalka Covid-19 loo soo bandhigayaa. Uma baahnid inaad muwaadin Iswidhish ah tahay si aad tallaalka ugu heshid. Waxaad boggan ka heli doontaa macluumaad ku saabsan Cadeynta Covid. Bogga ayaa caadi ahaan hal mar todobaadkii dib loo cusbooneysiiyaa.
Uppdaterades 6 apr 2022 13:23
Ballan tallaalka qabso
Tallaalku waxa weeye habka ugu wax ku oolsan ee looga hortagaayo in si xun loogu jirado ama Covid-19 loogu dhinto. Waxa uu sidoo kaloo tallaalku gacan ka geystaa dhimista faafitaanka cudurka.
Tallaalka iyo doosaska kaabista ah ayaa laguu soo jeedinayaa xitaa haddii uu covid-19 hore kuugu dhacay. Difaaca aad ka hesho tallaalka ayaa lagaga kalsoon yahay marka la qarab dhigo difaaca aad ka hesho kadib marka uu cudurku kugu dhacay. Qofka uu Covid-19 ku dhacay ayaa difaac cudurka ka ilaaliya yeeshay, laakiin maanta ma ogin ilaa inta uu difaacaasi sii shaqeynaayo.
Gobolka ayaa ka mas'uulka ah tallaalka covid-19. Waxa 1177.se ku yaala macluumaad ku saabsan sida balanta tallaalka loo qabsado. Gobolkaaga bogga xagiisa sare ka dooro.
Tallaalka kooxaha dadka ee kala duwan
Waxa dhamaan dumarka uurka leh loo soo jeedinayaa inay Covid-19 iska tallaalaan maadaama oo uu tallaalku ku siinaayo difaac wanaagsan oo kaa illaaliya inaad si xun ugu jirato oo uu hoos u dhimo khatarta uu ilmahu hore kaaga soo dhacaayo.
Carruurta iyo da'yarta
Dhamaan dadka 12 sano jirka ah iyo wixii ka weyn ayaa tallaalka Covid-19 loo soo bandhigayaa. Gobol kasta isaga ayaa go'aaminaaya sida uu u maareynaayo oggolaanshaha marka carruurta aan wali qaan gaarin la tallaalaayo.
Tallaalka laga bilaabo da'da 5 sano jirka
Carruurta kooxaha qaar aadka ugu nugul caabuqyada hawomareenka ka tirsan ayaa loo soo jeedinayaa inay laga bilaabo da'da 5 sano jirka covid-19-la iska tallaalaan. Waxay u badan tahay in doosaska tallaalka la heli karro maadaama oo bisha Janaayo 2022 dhexdeeda Iswiidhan oo dhan loo kala qeybiyey.
Tallaalka covid-19 loo ansixiyey
Waxa jira shan tallaal oo Covid-19 Iswiidhan iyo Midowga Yurub loo ansixiyey:
Comirnaty, oo ka socota Pfizer/BioNTech.
Spikevax, oo ka socota Moderna.
Vaxzevria, oo ka socota Astra Zeneca.
Covid-19 Vaccine Janssen, oo ka socota Janssen.
Nuvaxovid oo ka socota Novavax.
Saddex tallaal ayaa Iswiidhan lagu isticmaalaa
Comirnaty oo ay soo saarto Pfizer/BioNTech, Spikevax oo ay soo saarto Moderna iyo Nuvaxovid oo ay soo saarto Novavax ayaa ah tallaalada xilligan hadda aynu joogno lagu isticmaalo Iswiidhan.
Sidee ayuu tallaalku wax u difaacayaa?
Waxa tallaalka ka dib wali jirta khatar Covid-19 lagu qaadaayo laakiin waxa uu tallaalku abuurayaa difaac wanaagsan oo kaa ilaaliya inaad si xun ugu jirato. Unugyada difaaca jidhku waxay dhisaan difaac Covid-19 ku lid ah laakiin lama hubo in dhamaan dadka la tallaalay oo dhami ay difaac buuxa yeeshaan. Waxay taasi khuseysaa dhammaan talaallada oo dhan, ee ma aha talaalka covid-19 uun.
Waa maxay saameynaha xunxun ee tallaalka covid-19 uu leeyahay?
Waxa badiyaa la yeeshaa saameyno gaar ahaaneed oo meesha irbada lagaaga duray agteed aad ku yeelato, sida tusaale ahaan damqasho, barar iyo meesha oo ku guduudata. Waxaad xitaa yeelan kartaa murqo xanuun, qandho, madax xanuun iyo dareen guud oo in la jiran yahay ah. Kuwaasi waa falcelin dabiici ah oo ay unugyada difaaca jidhku sameeyaan. Kiisaska intooda badan ayay falcelimahu yihiin qaar khafiif ah oo iyagu iskood dhowr maalmood gudahood iskaga taga.
Waxay Cadeynta Covid kuu dhib yareynaysaa markaad safrayso iyo xafladaha/dhacdooyinka. Cadeynta Covid waa bilaash waxaanad heli kartaa Cadeynta Covid oo dhijitaal ah ama warqad ah.
Waxa jira cadeymo saddex nooc ah:
Shahaadada tallaalka: Cadeyn muujinaysa in la is tallaalay.
Shahaadada tijaabada: Cadeyn baaritaan ka dib muujineysa in aan Covid la qabin.
Shahaadada ka bogsashada: Cadeyn mujineysa in laga bogsaday.
Iswiidhan ayaa Hay'adda caafimaadka dhijitaalka ahi mas'uul ka tahay adeeggayada Cadeynta Covid.
Sidee ayaan u helayaa Cadeynta Covid ka?
Qofka aqoonsi shaqeynaaya oo elektaroonig ah oo Iswiidhish ah haysta ayaa cadeynta Covid ee dhjitaalka ah ka dalban kara www.covidbevis.se.
Haddii aanad laheyn, ama aanad isticmaali karin aqoonsiga elektarooniga ah ayaad heli kartaa in cadeyntaada Covid cinwaanka guriga aad ka diiwaan gashan tahay laguugu soo diro. Xitaa dadka aan haysan ciwaan ay ka diiwaan gashan yihiin ayaa cadeynta covid dalban kara.
Dadka aan haysan lambarka shakhsiga ama lambarka isku xidhiidhsiinta lambarka shakhsiga ee tusaale ahaan la siiyo dadka Iswiidhishka ee wadanka dibadiisa ku dhashay
Dadka aan laheyn lambarka shakhsiga ee Iswiidhishka ama lambarka isku xidhiidhsiinta nambarka shakhsiga ee la siiyo dadka Iswiidhishka ee wadanka dibadiisa ku dhashay ayaa tallaalkooda lagu siiyay waxa loo yaqaano lambarka keydka. Dadkaas ayaa marka laga bilaabo Janaayo 2022, heli doona cadeynta tallaalka, iyagoo daryeelka caafimaadka ee gobolkooda la xiriiraara. Waxa taasi shuruud u ah in tallaalka Iswiidhan lagu qaatay.